မိုးခေါင်ရေရှား၍ ရှေးထုံးစံနည်းအရ ဧရာမအမျိုးသား ရွှေပန်းပုံသဏ္ဍန်ဖြင့် ၄၅ ဒီဂရီ ချိန်ရွယ်ကာ မိုးနတ်သမီးထံ ထိုင်းလူမျိုးတို့ရဲ့အချက်ပေးမိုးခေါ်နည်း - ခေတ်သစ်နတ်ခ်
admin | December 19, 2021 | International News, knowledge | No Comments
( ဗဟုသုတအဖြစ်သာ )
မိုးရာသီမှာ မိုးခေါင်ရေရှား ပြဿနာဖြစ်ပေါ်ပြီး လယ်တွေ ပတ်ကြားအက်တာမျိုး ၊ရေတွင်း ရေကန်တွေ ခမ်းခြောက်တာမျိုး ရင်ဆိုင်ကြရပြီ ဆိုရင် တောင်သူလယ်သမား
ဦးကြီးများအတွက် အခက်တွေ့ကြရသလို ပူအိုက်လွန်းတဲ့ ရာသီဥတုကို မည်သူမျှ ကြိုက်နှစ်သက်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။မြန်မာ့ဓလေ့ ရှေးထုံးစံကတော့ သပြေခက်နဲ့ အုန်းပွဲငှက်ပျောပွဲကိုအလယ်လွန်အိမ်မှာ ထားပြီး မိုးခေါင်ကျော်စွာ နတ်မင်းကို တိုင်တည်၍ ရွာမိရွာဖတွေ ဦးစီးလို့ ကာလသားတွေနဲ့ ဟိုဘက်ဒီဘက် ညှင်ညှင်သာသာလေးလွန်ဆွဲပွဲ ပြုလုပ်ကြတာကို ငယ်စဉ်က ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ် ။
ယခုလည်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မိုးခေါင်ရေရှားပြီး ခြောက်သွေ့လွန်းတာကြောင့် ရှေးပဝေသဏီက ယုံကြည်မှုအတိုင်း မိုးခေါ်တဲ့ပုံက ထူးဆန်းလွန်းနေသလို မိုးနတ်သမီးကို နောက်ဆုံးအကြိမ်သတိပေး ခြိ.မ်းချော.က်တာလို့လည်းဆိုပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့ ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ နခွန်စဝမ်ခရိုင် ” ကောက်လျို့ ” မြို့နယ် ခေါင်ဒင်းကျေးရွာအုပ်စုမှ ကြံစိုက်ခင်းတောင်သူများ စုပေါင်းပြီး
ဧရာမအမျိုးသားငယ်ပါ ( သို့ ) ရွှေပန်းပုံသဏ္ဍန်ကို ပြုလုပ်ပြီး အနီရောင်ဆေးသုပ်ကာ အုန်းသီးနှစ်လုံးကို အရင်းမှာကြိုးဖြင့်ချိတ်၍ မိုးနတ်သမီးကို ၄၅ ဒီဂရီ ချိန်ရွယ်ကာ အမွှေးနံ့သာ ပက်ဖြန်းပြီး မိုးရွာစေအောင် ပြုလုပ်တဲ့ဓလေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက် မိုးတစ်ဖြိုက် နှစ်ဖြိုက်ဘဲရွာချလို့ နောက်ထပ် ဒီထက်ကြီးတာနဲ့ ထပ်အသုံးပြုမယ်လို့ Kaosod News မှာ ရေးသားပါတယ်။ထိုင်းလိုတော့ ” ပလတ်ခစ် ” လို့ ခေါ်ပါတယ်။
စျေးဆိုင်တွေမှာ အရွယ်အစား အမျိုးမျိုးကိုရွှေချ၍ ဆောင်ထားသူတွေလည်း ရှိပါသည်။ ပြ.ည့်တ.န်ဆာလုပ်ငန်း လုပ်သူတွေလည်း ဆောင်ထားကြပါသည်။ လာဘ်ရွှင်သည် ဖောက်သည်ကောင်းကောင်း ရသည်ဟု ယုံကြည်ကြပါသည်။
တစ်ခါက ဖန်းငခရိုင် Kohpoda ကျွန်းကို သွားစဉ် ကျွန်းတစ်ကျွန်းဘေးက ဂူထဲတွင် ထိုကဲ့သို့သော သစ်သားရုပ်ထုများကို ခရီးသွားများ အရင်ဆုံး ပူဇော်ပသ ထိုင်ကန်တော့ကြနေတာကို မြင်တွေ့ခဲ့ရ၍စပိဘုတ်သမားကို မေးကြည့်တော့ ပင်လယ်ပြင်စောင့် ” မဏိမေခလာ ” နတ်သမီးကို အသိပေး ဆက်သကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။တံငါသည်များအဖို့ ပင်လယ်ကို ငါးဖ.မ်းမထွက်မီ ကိုယ်တိုင် ထုဆစ်ယူလာပြီး
ယခုလို လာရောက်ပူဇော်မှုကြောင့် ဆိုဒ်အရွယ်အစားမျိုးစုံ တောင်လို ပုံနေပါသည်။ ဒီလိုယုံကြည် ကိုးကွယ်မှုဟာအန္တရာယ် ကင်းရှင်းတယ်။ လာဘ်လာဘ ရွှင်တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
တာချီလိတ် – မယ်ဆိုင် ချစ်ကြည်ရေးတံတားကို ဝင်လိုက်တာနဲ့ ဂိတ်ရဲ့ဘယ်ဘက်ခြမ်းက စျေးဆိုင်တိုက်ခန်းဝရံတာမှာ ထိုကဲ့သို့ အရာဝတ္ထုများကို အရွယ်မျိုးစုံ ဒေါင်လိုက်ထောင်ထားတာကို ရောက်ဖူးသူတစ်ချို့ သတိထားမိကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
တစ်ရွာတစ်ပုဒ်ဆန်းတဲ့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတွေက ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့တော့ ထူးဆန်းနေပါတယ်။ ဒီ ” ပလတ်ခစ် ” က ဘယ်က ဆင်းသက်လာတာလဲ ? ဘယ်သူ့ဟာလဲ ? လို့တိတိကျကျ ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့သေးပါဘူး။အကယ်၍များ မိုးနတ်မင်းဆိုရင် အမျိုးသမီး ငယ်ပါနဲ့ခေါ်လေမလားလို့ တွေးမိပြန်ရောဗျာ။ ယခုလည်း နခွန်စဝမ်မှာ နောက်ထပ်ဆက်လက်ပြီး မိုးခေါင်ရေရှား
ဖြစ်နေအုံးမယ်ဆိုရင် ဒီထက်ကြီးမားတဲ့ လက်နက်ကို ထုတ်သုံးပြီး နောက်ဆုံးအကြိမ်နဲ့ မိုးနတ်သမီးကို ခြိ.မ်းချ.ောက်ရလိမ့်မယ်လို့ ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။
နတ်သမီးခမျာ လန့်ဖြန့်ပြီး ” တစ်ဗျန်းဗျန်း ” နဲ့များ ရက်ဆက် မိုးရွာချလိုက်မှဖြင့် ရေကြီးတဲ့ဒုက္ခ ထပ်ကြုံနေမှဖြင့် ဟုတ်ပေ့လ်ို့ တွေးမိရင်း ပြုံးမိပါတော့သည်ဗျ
ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ တရားမဝင်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မည့် အလုပ်သမားများ
တရုတ်- မြန်မာနယ်စပ် ( လောက်ကိုင်)နားမှ ဒုတိယမဟာတံတိုင်းကြီး ကာရံရခြင်း ၏ နောက်ကွယ်မှ အဖြေသည် Mystery ဆန်လွန်းသော လျှို့ဝှက်သဲဖို ဇာတ်လမ်းဖြစ်နေ